सर्वश्रेष्ठ Discoveries संग कलेज जीवनसाथी अन्वेषण | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सर्वश्रेष्ठ Discoveries संग कलेज जीवनसाथी अन्वेषण
कलेज साथीहरू को कम्पनी मा यात्रा, यो एक यात्रा गर्न होइन र बस स्वभाविक हुन पूर्णतया ठीक छ. कुनै आशा वा कुनै पनि पूर्व योजना साथ ठाउँ घुम्दै वास्तवमा लुकेको सम्पत्तिहरू खोजी को सबै भन्दा राम्रो तरिका हो. रमाइलो र uncensored अन्वेषण लागि पर्याप्त कोठा छोड्दा. त्यसैले, तपाईं र तपाईंको साथीहरू कहाँ सुरु हुन्छ जब तपाईं कडा गर्नुपर्ने सूची बिना प्रामाणिक खोजहरू गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं कसरी घर देखि टाढा सबै भन्दा राम्रो आविष्कारहरू पाउन सक्नुहुन्छ? तपाईका विकल्पहरू के के छन्??
राम्रो, तपाईं को लागि भाग्यशाली, यो एक नक्कली बनाउन सम्भव अब एक भिसा लागि उडान आरक्षण एक विमान टिकट वा यात्रा यात्रा भुक्तानी बिना. एउटा यात्रा बिना यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ. कि बाहेक, प्रविधि नक्सा र guidebooks सजिलै पहुँच बनाएको छ, त्यसैले तपाईं पूर्णतया यात्रा सुझावहरूको लागि तपाईंको फोन भरोसा गर्न सक्छन्. यहाँ छन्5कलेज जीवनसाथी संग सबै भन्दा राम्रो आविष्कारहरू अन्वेषण लागि थप सुझावहरू:
1. नि: शुल्क पैदल यात्रामा सम्मिलित हुनुहोस्
खोज र दर्ता नयाँ शहर मा आफ्नो पहिलो दिन नि: शुल्क पैदल भ्रमणका लागि. तिनीहरूले पाउन सजिलो हो – बस होटल मा कर्मचारी सोध्न तपाईं पहिलो रात खर्च गरिनेछ, वा पूछताछ अन्य विद्यार्थी यात्री देखि तपाईं आफ्नो छात्रावास पाउन. इन्टरनेटमा द्रुत खोजीले तपाईंलाई राम्रो फेला पार्न मद्दत गर्दछ नि: शुल्क पैदल यात्रा. नोट हुनत पर्यटन शुल्क को मुख्य मुक्त छन् भनेर, यो उत्तम छ कि तपाइँ एक सानो बजेट को लागी अलग टिपिंग टुर गाइडहरू.
कसरी मुक्त पैदल पर्यटन काम? तपाईं उपलब्ध हुनेछ जब तपाईं मिति र समय को लागि एक मुक्त पैदल भ्रमण फेला, तपाईं साइन अप, एक बैठक बिंदु तपाईं कुराकानी छ, तपाईँलाई समय भनेर बिन्दुमा देखाउनका, र त तपाईं सबै भ्रमण पुस्तिका गर्न अरू छोड्न. को charismatic भ्रमण पुस्तिका तपाईं शहर र सजिलो संग आफ्नो सरहद पत्ता लगाउन मद्दत र सहरका को गहिरा समझ हासिल हुनेछ अद्वितीय वास्तुकला र स्थानीय संस्कृति.
2. आफूलाई हराएको प्राप्त गर्न अनुमति
अब एक अनुभवी भ्रमण पुस्तिका मदत छ भनेर शहर को सबै भन्दा भागहरु पत्ता, यसलाई अब बन्द प्राप्त गर्न समय छ अनियमित स्टेशन र आफ्नो मा सेरोफेरो अन्वेषण. जानाजानी "खो" मान्छे को समुद्र मा touristy क्षेत्रमा जोगिन र. र तपाईंलाई साथीहरूसँग कारण, तपाईं व्यक्तिगत सुरक्षा बारे धेरै चिन्ता छैन. तपाईं असंख्य पत्ता लगाउन हुनेछ लुकेका रत्न – कुनै पर्यटक अघि कहिल्यै देखेको छ कुराहरू. यो तपाईं अपरिचित कुरा गर्न खुला छन् भने कुनै एक तपाईं शहर को स्थानीय भन्दा राम्रो पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ किनभने मदत गर्नेछ.
3. गुगल नक्शा प्रयोग गर्नुहोस्
गुगल नक्शा वा एप्पल नक्शा ठिक छन्, यद्यपि एप्पलले Google नक्सामा भएको भविष्यवाणी र शुद्धतालाई हराउन सक्दैन. सायद यो किनभने सबैभन्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता Android संचालित छन् उपकरणहरू छ, सबैभन्दा त पर्यटक गन्तव्य समीक्षा गुगल नक्सामा गरिन्छ. समूह परिभ्रमण लागि साँच्चै राम्रो एउटा काम क्षेत्र को गुगल नक्शा अध्ययन – यो तपाईं वरिपरि के को सिद्ध विचार दिन्छ. गुगल समीक्षा तपाईं बताउन हुनेछ खाना खाने उत्कृष्ट स्थानहरू, जहाँ पाउन सर्वश्रेष्ठ वाइन, र एक कलेज यात्री रूपमा भ्रमण गर्न कहाँ मा तपाईं सावधानी. यो जानकारी अन्वेषण र थप पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ.
4. स्थानीय घटनाक्रम उपस्थित
तपाईं निर्दिष्ट उद्देश्य बिना सडकमा लक्षविना हिड्नु गर्न चाहनुहुन्छ भने, किन त एक स्थानीय घटना उपस्थित छैन? व्यापार मेला लागि वरिपरि सोध्न, कला शो, संगीत, वा चाडहरूमा र तिनीहरूलाई कुनै पनि डुबाउनुहोस्. यदि तपाईं खेल प्रेम, एक स्टेडियम जानुहोस् वा सडक फुटबल खेलमा भाग लिनुहोस्. तपाईं पनि तिनीहरूले सत्कार पर्याप्त छन् यदि स्थानीय खेल्न सक्छ. यो शहर एक गहिरो दृष्टिकोण दिन र तपाईं स्थानीय अन्तरक्रिया र उनीहरूको दैनिक संघर्ष र सुख अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ – एक स्थानीय जस्तै. तपाईं आफ्नो चलिरहेको क्षमता भरोसा भने म्याराथन चलाउन. आफ्नो जीवनसाथी संग प्रतिस्पर्धा यसलाई अझ रमाइलो बनाउन हुनेछ.
5. लाभ सामाजिक मिडिया
फेसबुक समीक्षा कलेज साथीहरूसँग ब्याकस्पेसिङ जाने तपाईं भन्नेछु जहाँ, जबकि के पत्ता लगाउन त्यहाँ, र तपाईंलाई सबै कि गन्तव्य बारेमा जान्न. कलेजमा भर्ना हुनुहोस् यात्रीहरूको तपाईंको मनपर्ने समूह, फेसबुकमा भन्न, र ज्ञान सदस्यहरु को मन छनोट. सामाजिक मिडिया दिइएको क्षेत्रका लागि आफैले अनुभव मान्छे देखि प्रमुख जानकारी भेला लागि सुन मेरो हो.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, हरेक दिन घमन्डी जवान कलेज यात्री को कुनै पनि समूह को लागि एक सिक्ने मौका छ. बस लागि उचित योजना छ तपाईंको स्वास्थ्य र यात्रा बीमा, तर आफैंलाई निश्चित यात्रा मार्गमा सीमित नगर्नुहोस्. तपाईंको उत्सुक युवा आत्म अन्वेषण र आविष्कार गरौं र तपाईं हाम्रो लेख मन पराएका यदि, त्यसपछि आफ्नो रेल टिकट आदेश एक ट्रेन सेव.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “सर्वश्रेष्ठ Discoveries संग कलेज जीवनसाथी अन्वेषण” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, र तपाईं आफ्नो छनौट को pl गर्न fr वा डे र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
कलेज कलेजमेट्स खोजहरु यात्रा Travelingtips
म व्यापार विश्लेषक हुँ, र एक वित्तीय प्रशिक्षक जसले विगत दुई बर्षदेखि आत्म-विकासको बारेमा अनुसन्धान गर्दै छन् र अब विश्व भ्रमणमा छन्. म म्याराथन धावक पनि हुँ र ग्रेट वाल म्याराथनलाई जीवनभरको लक्ष्यका रूपमा सेट गरेको छु! मेरो जीवन मिशन अरूलाई तिनीहरूको सपनाहरु को लागी प्रेरित गर्न हो. - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्